NRC: Meel Nabad ah ayey ku noolaayeen, waxayna tagayaan meel cabsi ah - BBC News Somali
NRC: Meel Nabad ah ayey ku noolaayeen, waxayna tagayaan meel cabsi ah
17 Maajo 2019
Lahaanshaha sawirka NRC
Image caption Halima Ahmed
Xaliima Axmed oo ah hooyo 24 jir, wadata wiilkeeda yar ee Mascuud oo 18 bilood jir ah waxay fadhidaa gurigeeda oo ku yaalla xerada qaxootiga xagardheere.
Hooyadan waxay dooneysaa in iyada iyo afarteeda carruurta ahba ay ku laabtaan Soomaaliya, si ay ula midoobaan seygeeda oo dalkiisa hooyo dib ugu laabtay 10 sano kaddib.
Xerada qoxootiga ee hoos tagta degmada Dhadhaab, oo ah xerada qoxootiga ee caalamka ugu weyn ayaa laga cabsi qabaa in dhawaan albaabbada la isugu laabo iyadoo qoxootiga Soomaalida ah ay qasab ku noqoneyso iney dalkooda hooyo dib ugu laabtaan.
Xerada qoxootiga ee Dhadhaab oo ku taalla Waqooyi-bari Kenya waxaa la aasaasay sanadkii 1991-kii, marki uu dagaalka sokeeya ka qarxay dalka Soomaaliya, waxayna muddo hoy u tahay dad kor u hdaafaya 500,000 oo qof.
Macluushii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011-kii ayaa sidoo kale xerada ku soo biirisay 235,269 ruux oo qoxooti ah.
Warbixintan oo aan ka soo xigannay hay'adda NRC ayaa sheegeysa iney hay'addu la hadashay qaar ka mid ah dadka doonaya iney dib ugu laabtaan Soomaaliya.
"Wax shaqa ah kama jirto halkan"
Cali oo 34 jir ah iyo dhalinyarada isaga la midka ah ee ku nool xerada qoxootiga ee dhadhaab wax shaqo ah ama xuquuq muwaaddinima ah kuma haystaan halkan.
"Shaqo kama jirto meeshan, adeegyada aan xerada ka heli jirnay laftooda wey sii yaraanayaan, wax fursad gnacsi ah ma jirto, nolosha qoyskaaga waxba kama baddali kartid" ayuu yiri Cali."
"Halka aan wakhtigeyga Dhadhaab isaga lumin lahaa waxaa la ii qaataa inaan Soomaaliya shaqo u raadsado. waan isku dayay inaan camal ka sameysto xerada dhexdeeda laakiin degganaasho iyo qaneeco midna kuma helin" ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Image caption Ali Dhimbil Ahmed
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrim aha Qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in dad gaaraya 83,248 oo ka mid ah qoxootiga ku sugan Dhadhaab ay diideen inay dib ugu noqdaan dalkooda Hooyo.
Howsha dib u noqoshada Qaxootiga oo aan cidna lagu khasbeynin ayaa kuna xiran qof walba iyo rabitaankiisa ayaa la billaabay sanadkii 2014-kii. ilaa haddana waxaa si iskood ah Soomaaliya ugu noqday dad gaaraya 2,900 oo qof.
UNHCR iyo Kenya oo lagu dhaliilay celinta qaxootiga
MSF: Qaxootiga Dhadhaab badankood noqosho diyaar uma ahan
Balse kumannaan uu ka mid yahay Cali ayaa doonaya iney masiirkooda go'aansadaan oo ay khatarta wajahaan.
Sanadkii 2016-kii dowladda Kenya waxay sheegtay inay xireyso xerada qoxootiga ee Dhadhaab, balse maxkmadda sare ee dalka Kenya ayaa diidday iyada oo go'aanka dowladda Kenya ku tilmaantay mid aan waafqsaneyn dastuurka dalka, inkatoo ay maxkamaddu go'aankeeda sanad kaddib baddashay.
Image caption Luul Noor iyo Seygeeda Maxamed Ibraahim
Luul Nuur iyo seygeeda Maxamed Ibraahim waxay go'aansadeen in iyaga iyo carruurtooda ay Soomaaliya ku laabtaan.
Qoyska Maxammed waxay ka mid yihiin qoysaska loo diiwaan galiyay iney iskood ugu noqdaan dhulkooda hooyo, marxaladda dib u noqoshadana waxaa gacan ka siinaya UNHCR iyo dowladda Kenya.
Lahaanshaha sawirka IFO/Dhadhaab
Image caption Xaliima Axmed iyo Carruurteeda
"Waxaa ad uga walwalayaa carruurteyda waxbarasha la'aanta soo food saari karta. Anigu wax ma baranin waana guursaday marka ma doonayo iney carruurteyda noolasheyda oo kale wajahaan. Balse Insha'Allah waxaan mar walba rajeynaynaa inay nolosha Soomaaliya ay dhaami doonto tan ka jirto xerada qoxootiga ee dhadhaab" ayey tiri Xaliima.
Xaliima waxay carruurteeda la tageysaa gobolka Jubbada hoose, halkaasoo dagaallada ay wali ka dhacaan mararka qaar.
Image caption Faadumo Abdula
Faadumo Cabdalla, oo 31 jir ah, waxay Soomaaliya dib ugu noqotay 2 sano ka hor, laakiin dib ayey mar labaad usoo noqotay kadib markii ay xaaladdu noqon weysay sidii loogu sheekeeyay.
"Waxaan ku dhashay Soomaaliya, waxaana uga soo tagay dagaallada awgood. Aabahay wuxuu ku dhintay qarax annaguna waxaan usoo guurnay Dhadhaab oo naloogu sheegay nolol ka roon midda Soomaaliya. Dhowr sano kadib waxaan dib ugu laabannay Soomaaliya", ayey tidhi.
Hase ahaatee, Faadumo waxay hadda mar walba ka qoomameysaa dib ugu laabashadii Soomaaliya, mana rajeyneyso inay mar kale ka tagto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.